Lixdaan arrimood oo Haweeneyda ka dhiga Xaas wanaagsan oo cajiib ah | Aayaha
Maxaad kala soctaa waxyaabaha haweeneyda ka dhiga xaas wanaagsan oo tayo leh ?
1. Waa qof abaabulan
Xaaska wanaagsan waa qof abaabulan oo qorshe wanaagsan, marka ay haweeney tahay qof diyaarsan, sidoo kale gurigana waxa uu noqonayaa mid diyaarsan, xirfadda qorshayaasheeda wanaagsan waxay ka dhigantahay in hooyga uu mar kasta yahay mid hagaagsan, waana xaas isku dubaradan oo had iyo jeer qaabeysan, yaa heli karo xaas noocaas ah.
2. Kalgacayl ayay leedahay
Xaaska wanaagsan si dhab ah ayay u jeceshahay seygeeda, haween badan ayaa guur gala iyagoo aanan si dhab ah u jecleyn raggooda, balse xaaska wanaagsan waa mid si dhab ah u jeclaata, suurtagal ma ahan inaad noqotid xaas wanaagsan adigoo aanan jecleyn seygaaga.
3. Waa saaxiib
Xaaska wanaagsan ma ahn oo kaliya mid ninkeeda jecel balse waa saaxiib sidoo kale, waxay isku daydaa in xiriir saaxiibtinimo ay la yeelato ninkeeda, waxayna tan sii xoojineysaa xiriirka labada lamaane, xaaska wanaagsan waxay ogtahay inay muhiim tahay inay saaxiib la noqoto ninkeeda.
4. Waa qof dabacsan
Haweeney aanan jilcaneyn ma noqon karto xaas wanaagsan, xaaska wanaagsan waxay ogtahay kaalinteeda iyadoo si walba oo wanaagsan iskugu dayda sidii ay usoo bandhigi lahayd wanaageeda, waxay isku daydaa inaysan noqon xaas qeylo badan iyadoo isku dayda inay xaliso dhibka iyadoo aanan qeylin.
5. Waa taageere
Xaaska wanaagsan waa taageeraha dhabka ah ee seygeeda waqtiga wanaagsan iyo kan xun, waa tan seygeeda ku taageerta marxalad walba niyadana u dhista, waa tan had iyo jeer garab taagan ninkeeda.
Xaaska wanaagsan waa daacad, waxay ogtahay in hagaagidda guurka ay ku xirantahay shaqo adag iyo dhabar adeeg, dadaal walba ayay ku bixisaa guurkeeda iyadoo og waxyaabaha hagaajiya guurka iyo waxyaabaha bur buriya.
Xaaska wanaagsan waxaa xushmeeyaa oo qiimeeyaa nin kasta oo wanaagsan oo wax garad ah.
Previous articleUGAAR AH RAGGA: Waligaa ha sameyn sadexdaan Ballamood haddii aadan kasoo bixi karin
Next articleUGAAR AH RAGGA: Guurso Gabadha leh calaamadahan waa tan kugu habboon
3 things you should do in first six months of a...
Qaababka Ugu Wanaagsan Ee Lagu Ogaado In Qofka Aad Jeceshahay Uu...
Saxo Caadada adigoo gurigaaga jooga iskana yareey xanuunka Caadada